Soo dejisan SopCast 4.2 – Vessoft
WindowsKuwa kaleSoftware kaleSopCast
Bogga rasmiga ah: SopCast
SopCast – software ah iyo dhagaysiga muusigga, daawashada cajaladaha, ama channels internetka. Kooxaha software channels by qaybaha oo kuu ogolaanaya in aad geliso cinwaanka u aragto video la rabay. SopCast ku jira module kaas oo u saamaxaya dadka isticmaala diiwaangashan in ay sameystaan ​​channel gaar ah u gudbinta video oo ka tirsan shabakadda. Software ayaa kuu ogolaanaysaa inaad barato macluumaadka soo socda ee ku saabsan channel ah: daciifaa, tirada soo booqda, bilaabaan waqti, nooca la isugu gudbiyo, sharaxaad ku saabsan content iwm Haddii aad qabto dhibaatooyin SopCast waxay caawimaad ka bixisaa faahfaahsan oo la heli karo in FAQ tab ah, halkaas oo jawaabaha su’aalo caan ku yaalaan.
Daawo video iyo telefishanka internetka
Awoodda loo leeyahay in la abuuro aad channel gaar ah u gudbinta video oo ka tirsan shabakadda
Details of channel
Jawaabaha module si su’aalo loo jecel yahay
Soo dejisan SopCast
Faallo ku saabsan SopCast
SopCast Xirfadaha la xiriira
Tani waa qalab sahlan oo la adeegsan karo oo lagu baadho software-kaaga lagu rakibo kombiyuutarka oo wuxuu ku wargelinayaa cusbooneysiinta cusub.
CoolTerm – softiweer lagu beddelo xogta aaladaha sida GPS qaatayaasha iyo kontoroolada servo ku xiran kombiyuutarka iyada oo la adeegsanayo dekedaha taxanaha ah.
Maxima – set aalado loogu tala galay xisaabinta falanqaynta ama nambarada iyo dhismaha garaafyada. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la shaqeyso noocyo kala duwan oo xisaab ah.